Posted by JuneOne at 4:52 PM
သီရိရတနာ February 5, 2013 at 1:33 AM
သားသား ၅ နှစ်က အခုထက်ထိ သွားမနှုတ်ရသေးဘူး။ သွား ပြသနာလည်း မရှိသေးတာလည်း ပါ ပါတယ်။
သမီး ၁၁ နှစ်ကတော့ အခုမှ ကလေးသွားတွေ နှုတ်ခါစ ... သမီး ၉ နှစ်လောက်မှာ သွားဖုံးယောင်လာလို့ ရန်ကုန်မှာ သွားဆရာဝန် ပြဖူးတယ်။ သွားပိုးစားပီး သွား အမြစ်တွေ ပိုးဝင်လို့ ရောင်လာတာ ဆိုပီး အဲဒီ သွားကို ဖာတယ်။ အမောက်စလင် ၃ ရက်လောက် သောက်ရတယ်။ အဲဒါ သောက်ပီးတော့ သွားဖုံး အယောင်ကျသွားတယ်။ ကလေးမို့လို့ သွားအကျော မသတ်ပဲ သွားဖာပေးထားတာမို့ .. အတော်လေးကို ဂရုစိုက်ခဲ့ရတယ်။ သွားဖာထားပေမယ့်လည်း ဖာထားတာ ပေါက်ပီး သွားပိုး ပြန်စား .. သွားပြန်ကိုက်မှာ စိုးလို့ပါ။
သွားက ဖာထားတာဆိုတော့ သူ့ကို အပူမကန်အောင် ရေ ကို သောက်ဖို့ အမြဲ သတိပေးနေရတယ်။
သမီးတုန်းက သွားနှုတ်တာက လူကြီးသွား ထွက်လာလို့ မကျိုးသေး ( သို့) နှဲ့နေတဲ့ ကလေးသွားတွေကို နှုတ်ဖူးတယ်။ နှဲ့နေတဲ့ ကလေးသွားကို ကိုယ်ဘာသာကိုယ် မနှုတ်ချင်ဘူး။ အပ်ချည်ကြိုးတို့ လက်နဲ့ သွားနှုတ်တာ မတော်လို့ သွားဖုံး အပေါက် ကျယ်သွားပီး ထွက်လာတဲ့ လူကြီးသွားတွေက ယိုင်နေတာတို့ သွားတက်ဖြစ်နေတာတို့ ... သွားတွေ စောင်းနေတာမျိုးတို့ သွားတွေ ထပ်နေတာမျိုးတို့ .. ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဆရာဝန်ဆီမှာ သွားနှုတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ သွားနှုတ်တာ ထုံဆေးထိုးတာ တချို့ ဆေးခန်းက ၅၀၀၀ကျပ်၊ နာမည်ကြီး ဆေးခန်းက ဒေါ်လာ တရာလောက် တောင်းတယ်။ မဂိုလမ်းက ဆေးခန်းက ၂သောင်း ပေးရတယ်။ သွားနှုတ်ခ .. အမေရိကားမှာ ကလေး သွားနှုတ်တာ ၂ချောင်းကို ဒေါ်လာ ၂၀၀ နီးပါးပဲ ..
JuneOne February 5, 2013 at 10:17 AM
အိမ်က ကလေးတွေ သွားမကောင်းကြဘူး။၂ယောက်စလုံး ပဲ။ညဘက်လဲ သွားတိုက်ပေးတယ်။အချိုတွေ သိပ်ကြိုက်ကြတာကိုး။သားသားက သွားကောင်းတော့ ကောင်းတယ်။ဒီမှာတော့ စိတ်ညစ်ရတယ်..
သီရိရတနာ February 5, 2013 at 9:17 PM
ကိုယ် ဆိုလိုချင်တာကလေ .. ကလေးသွားတွေကို ၁၀ချောင်းတောင် နှုတ်ပစ်တဲ့ စင်ကာပူက ဆရာဝန်တွေကို အံ့သြမိလို့ပါ။
ကိုယ်တောင် မေလင်းလင်းဆီကနေ နာကျင်မှု့ကို သည်းခံနိုင်လွန်းတာကို သင်ယူရမယ်။
လူကြီးသွားလေးတွေ ပုလဲလုံးလေးတွေ စီတန်းနေသလို လှလှပပ ထွက်လာပါစေလို့ အန်တီသက် ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
JuneOne February 6, 2013 at 10:54 AM
ဒီမှာကတဲ့ သွားဆရာဝန်တွေက နှုတ်မယ် နှုတ်မယ်...ဒူးခေါင်းဆရာဝန်တွေက ခွဲမယ် ခွဲမယ်တဲ့ သက်ရဲ့။
Why need to go to NUH ? cannot see the PD at child clinic ?
JuneOne February 5, 2013 at 10:14 AM
Edwin တုန်းက အဲလိုအဆင့်ဆင့်သွားပြီးမှ နောက်ဆုံး NUH ကိုပဲလွတ်ကြတယ်...ပထမ ရိုးရိုးဆေးခန်း..နောက် ကလေးသွားဆေးခန်း..နောက် National Health Care က Student Dental Care အဲကနေမှ ကလေးက သူတို့နဲ့ cooperate မလုပ်လို့ ဆိုပီး NUH မှာဆိုရင် ကလေး dentist specialist တွေလဲရှိတယ်...မေ့ဆေးပေးရမယ်ဆိုရင် အဲ့မှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပီး NHC က စာရေးပီး လွှဲပေးတယ်။အဲဒါကြောင့် မေ့အလှည့်ကျတော့ တစ်ခါထဲ ပဲ တန်းသွားလိုက်တာ...စဉ်းစားမရတာ NHC့  ဘာလို့ KK ကိုမလွှတ်တာလဲလို့...
JuneOne February 5, 2013 at 10:19 AM
ဒါပေမယ့်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ အထဲမှာ NUH က ကလေးဆရာဝန်တွေ တော်တယ်။ကလေးကို သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်....
i think we met on that day at edwin's school. Edwin and May are very cute and active inside and outside blog :) Their mama (mother) as well pretty.
Thank you for helping me,ma.
JuneOne February 6, 2013 at 10:56 AM
Their ma ma is ဖိုသီဘတ်သီ...ညီမလေးက ဖြူဖြူ ချောချောလေး ..တွေ့ဖူးသွားပြီ။
NSA February 6, 2013 at 12:26 PM
ချစ်ဖို့ကောင်း၊ လိမ္မာပြီး သနားစရာမေကလေး...။
ဖုန်းထဲကနေ ဖတ်ပြီး ကောမန့်ရေးမရလိူု့ ဒီနေ့မှ လာရေးရတယ်...
khin March 7, 2013 at 12:18 PM
Oh!... No... how is she after she had done from the clinic? Ten teeth!!! Aunty wanna hug you little brave May Lynn Lynn.
Anonymous March 10, 2013 at 6:20 AM